12V DC 110 / 240V AC LED neon flex ìhè Ọkụ eriri ọkụ,Ọkụ ọkụ ọkụ,Guzheng Town Led Home Decorative,Guangdong Led Home Decorative - China 12V DC 110 / 240V AC LED neon flex ìhè Ọkụ eriri ọkụ, Emepụta & ndozi
12V DC 110 / 240V AC LED neon flex ìhè Ọkụ eriri ọkụ. Anyị nwere nhọrọ kachasị elu nke ikuku voltage na nnukwu eletrik ọkụ na-acha ọkụ ọkụ maka ime ụlọ na n'èzí ọkụ ọkụ. Anyị na-echekwa ihe dịgasị iche iche nke ihe ndị EC n'oge nile nke okpomọkụ kelvin a na-achọsi ike nakwa dịgasị iche iche ntinye nke lumen ịhọrọ. Jiri akwa elu ya maka eriri ọkụ na ime na mpụga ebe ọ dị mkpa ịchọta ọkụ dị mma, mma nlegharị anya na ebe obibi. A na-anwale igbe ntanetịime Ribbon Star anyị dị ala, a tụrụ ya maka awa 50,000 ma nwee akwụkwọ ikike afọ abụọ. Chọgharịa anyị nhọrọ nke Premiya RGB, na Single agba ibe n'okpuru ma ọ bụ nye anyị oku na ajụjụ ọ bụla ị nwere iji chọpụta nke LED warara ìhè dị mma n'ihi na ị.It mụbara luminous nrụpụta ọrụ na elu-ike SMDs ekwe LED warara ọkụ na- eji mee ihe dị ka ọkụ ọkụ na-egbuke egbuke, ọkụ ọkụ na ọkụ halogen, ihe ntanye ọkụ ọkụ, nchọpụta Ultra Violet n'oge nhazi usoro, nhazi na ejiji, na ọbụna na-eto eto.( 12V DC 110 / 240V AC LED neon flex ìhè Ọkụ eriri ọkụ )
12V DC 110 / 240V AC LED neon flex ìhè Ọkụ eriri ọkụ